Dab qabsaday Xero barakacayaal oo ku yaala Boosaaso +Sawiro – SBC
Dab qabsaday Xero barakacayaal oo ku yaala Boosaaso +Sawiro
Maanta magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxa ka kacay Dab Kaam ku yaala dhanka qorax u dhaca magaalada Boosaaso, kaas oo lagu magacaabo Kaam Tawakal Ama Tooro booro.
Wariye yaal ka socday Hay’ada Warbaahinat Soomaaliyeed ee SBC ayaa tagay halka uu kakacay dabkaasi uurana ay isqabsatay ayaa waxa waxa ay kulak ulmeen dad usoo gurmaday dadkaas , iyo rag dhalinyaro u badan oo u istaagay sidii ay dabkaas inta ay ka gaaraan u baqtiin lahaayeen.
”Waxnagu caawiyay in ay naga damiyaan dabka oo dhanka maamulka majirto anaga ayaana gacmahayaga ku daminay dabkaasi markii aanu daminay kadibna waxa nasoo gaartay booyada dab damiska oo qura,khasaare guryeed iyo mid hantiyeedba waaynaga soo gaartay dabkaasi” Sidaasi waxa yiri mid kamid ah dadka dagana kaamkaasi uu dabku kakacay oo lahadlayay warbaahinta.
Inta lahubo kudhowaad boqolaal guri oo ay daganayen barakacayaasha kunool kaamkaasi ayaa gubtay mase jirto dad ku dhintay intii uusocday dabkaasi sida ay noo xaqiijiyeen dadkii goobtaasi kusugnaa.
Mid kamid ah isna horjoogayaasha kaamka oo warbaahinta lahadlayay ayaa sheegay in dadkii daganaa kaamkaasi Tawakal uu khasaare ba,an soo gaaray ayna yihiin dad masaakin ah oo aan awood ulahayn in ay kasoo kabsadaan dhibaatadaasi soo gaartay waxana uu maamulka iyo waliba hay,adahaba iyo cidii kale ee wax u awooda kacodsaday inay kaalmo bini aadinimo oo dag dag ah ay lasoo gaaran.
Lama garan karo ilaa iyo hada sababta kadambaysay in uu kaco dabkaasi in kastoo la wada dareemi karo dabeysha baaxada leh ee xiliyadan ka jira gobolada Puntland kuwaas oo gacan ka geystay in uu dabkaasi ku sii faafo dhamaan xerada gubatay.